ZESN Inoparura Chirongwa cheKudzidzisa Vanhu Sarudzo
Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESN, rakaparura chirongwa chedzidziso chariri kuita mumatunhu emunyika pamusoro pehutongo hwegutsaruzhinji, matongerwo pamwe nesarudzo chinonzi muchirungu “Building Resources in Democracy, Governancy and Elections’’, BRIDGE.
Sangano iri rati dzidziso idzi, idzo riri kuita pamwe chete nemasangano anoti reAustarlian Electoral Commission, UNDP, International Foundation for Electoral Reforms, International Institute for Democracy and Electoral Assistance neUnited Nations Electoral Assistance Division, ichabatsira zvikuru veruzhinji kuti vanzwisise nyaya dzesarudzo.
Svondo rapera sangano iri rakaitisa zvidzidzo izvi kune vemasangano akasiyana siyana anodarika makumi matatu muBulawayo avo vanozotarisirwa kunodzidzisawo vanhu vemunharaunda dzavanogara.
Vakapinda mumusangano uyu ndevemasangano akazvimirira vaibva mumatunhu anoti Bulawayo, Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South neMidlands.
Mukuru weZESN, Amai Rindai Chipfunde-Vava, vanoti dzidziso iyi yakananganawo nevechidiki vachavhota kekutanga pamwe nekuti vanhu vabatsire mukucheneswa kwegwaro revavhoti, iro rinonzi neveruzhinji harina kuchena.